Wasiirka Kalluumaysiga Oo Ku Baaqay In Laga Faa’iidaysto Fursad Ganacsi ku jirta Xeebaha dalka | Somaliland.Org
Wasiirka Kalluumaysiga Oo Ku Baaqay In Laga Faa’iidaysto Fursad Ganacsi ku jirta Xeebaha dalka
January 7, 2013	Hargeysa (Somaliland.Org)- Wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka Badda Somaliland Mudane Cabdilaahi Jaamac Cismaan (Geel-Jirre) ayaa Ganacsatada wadanka ugu baaqay inay ka faa’iidaystaan khayraadka Badda oo uu tilmaamay inay ugu jirto fursad Ganacsi oo banaani.
Wasiirka Kalluumaysigu waxa uu sidaasi ka sheegay shir jaraa’id oo uu maanta ku qabtay xafiiskiisa magaaladda Hargeysa. “Ganacsatadda dalka waxaan u soo jeedinayaa inay u soo jeedsadaan ka faa’iidaysiga khayraadka badda oo ay ugu jirto fursad Ganacsi ee banaani. Waxaan ku boorinaynaa inay ku tun-tuunsadaan oo ay bartaan khayraadka dihin ee xeebteenna,”ayuu yidhi Wasiirka Kalluumaysiga iyo khayraadka badda Somaliland.
Md. Cabdilaahi Geel-jire waxa kale oo uu sheegay inay sanadkii hore Wasaarada Kalluumaysigu ay ku guulaysatay qodobo ay ugu muhiimsan yihiin maamul daadejinta, tababarka shaqaalaha wasaaradda iyo dhisme cusub oo laba dabaq ah oo wasaaraddu dhisatay oo uu tilmaamay in la furi doono todobaadka dambe.
Wasiirka Kalluumaysigu waxa kale oo uu sheegay inay sanadkii tagay joojiyeen ruqsadihii kalluumaysatada shisheeye, taasi oo uu xusay inay waxtar u yeelatay kalluumaysiga wadaniga ah.
Wasiirku waxa uu intaasi ku daray in Wasaaraddu ay samaysay xeer nidaamiyeyaashii ay ku shaqayn lahayd, taasi oo wax ka tari doonto xil-gudashadda waajibaadkooda shaqo.
Previous Post“Doorashaddii u Dambaysay waxay ahayd tii ugu dhib badnayd, dib ayaanan u qiimaynaynaa wixii dhacay”Next PostMasuuliyiin Baaq Ka Soo Saaray Dhismaha Masaajid Qabyo _ahaa 9 sano ah Oo Dib Loo Bilaabay	Blog